NA ỌDỊNIHU NKE IRIOLU GA-AGBAKWUNYE ALAEZE UKWU OTTOMAN - AKỤKỌ - 2019
Na nbịakwute na-abịanụ nke Oké Nchịkọta Nchịkọta na Ọdịnihu nke VI ga-abụ mba ọhụrụ.
Alaeze Ukwu Ottoman, nke Suleiman siri ike, mere ka ọ bawanyewanye site n'omume agha agha.
Otu ihe pụrụ iche nke mba ahụ ga-abụ, dịka na njedebe nke egwuregwu ahụ, ndị Janissaries. Ha ga-apụta na ndị Ottoman kama ịkọ ndị ọkachamara. Ngalaba ndị a enwekwuola ike na ọnụ ala dị ala tụnyere nkeji oge ha. Tụkwasị na nke ahụ, ndị Janissaries na-apụta na nkwalite n'efu.
Na mmiri, Ottoman Alaeze Ukwu ga-aghọ ihe iyi egwu: kama onye na-emebu privateer, egwuregwu ga-enwe ohere na-egwu ome Berber. Ha anaghị etinye ihe ha na-eme mgbe ha na-awakpo ụsọ oké osimiri. Ottoman siege units na-enweta bonuses - ha dị ike ma na-emepụta ngwa ngwa.
Ụlọ ọrụ pụrụ iche nke mba ahụ bụ Bazaar Ukwu, nke bịara iji dochie ụlọ ahịa. Mpaghara ahụ na-eme ka enwekwu obi ụtọ nke nhazi ahụ ma na-enye ego ndị ọzọ. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịnweta Gọvanọ Ibrahim Pasha na alaka ụlọ ọrụ pụrụ iche.
A ga - eme nzuko ịchịkọta oké ifufe na February 14.